Xilliga rasmiga ah ee uu furmayo shirka uu shaaciyey M/weyne Farmajo & goobta oo la shaaciyey.
January 31, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynaha dowladda federalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu iclaamiyey shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir.
Shirkaan oo ka qabsoomi doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii heshiis loo midaysan yahay looga gaari lahaa qodobada aadka laysugu hayo xilligaan.
Waxaa madaxweynuhu shaaciyey in shirkaani uu qabsoomi doono inta u dhexaysa 1 ilaa 3 bisha Febraayo ee 2021, taasi oo 5 cisho ka horraysa waqtiga rasmiga ah ee ay ku egtahaya muddo xileedka dastuuriga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Baaqqa madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo ifbaxay kadib markii uu maalinimadii shalay kulan xasaasi ah la qaatay madaxweynaha wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyo daneeyayaasha doorashooyinka dalka.